I-Apartment Bergameli, phakathi kwendalo kunye nedolophu endala
Kukho indawo eyaneleyo kule ndawo yokuhlala intle ukuze usapho lwakho lonke lonwabe. Kummandla okufutshane kukho zonke iziseko eziyimfuneko kunye nendalo, ebonelela ngeehambo ezintle, ukuqubha emlanjeni, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile nokunye okuninzi. Isixeko sibonelela ngezinto ezininzi ezikhangayo zenkcubeko, iigalari ezincinci, iivenkile kunye nemivalo encinci enomphefumlo. Ngaphezulu kwedolophu kukho inqaba yamandulo enemyuziyam kunye neziganeko zenkcubeko ngamaxesha athile, iikonsathi. Ngaba uyazi ukuba le yenye yeenqaba ezintlanu kummandla we-Škofja Loka?
Ungasebenzisa yonke indawo ekhoyo kunye nazo zonke izixhobo kunye nezinto ezigcinwe yifulethi. Ngeli xesha urentayo, likhaya lakho eli.
Kukho indawo yokubhaka, imarike, ikhemesti kunye nendawo eninzi eluhlaza ngokwesiseko emnyango. Imizuzu eli-10 kude (ngeenyawo) kukho idolophu endala nayo yonke into oyifunayo (iivenkile ezincinci, iigalari, iimyuziyam, imivalo, iivenkile zokutyela njl.njl.). Iziko lokhathalelo lwempilo kunye nogqirha wezilwanyana nabo basedolophini basebenza 24/7. Kukho indawo yokumisa ibhasi ekufutshane kakhulu kwaye isikhululo sikaloliwe akunzima ukufikelela kuso. Ukukhwela uloliwe kuthatha- imizuzu engama-30 ukuya eLjubljana okanye eBled, imizuzu emi-5 ukuya eKranj. Unxibelelwano lulungile.
A highschool teacher of biomedical sciences, interested in nature and music. Love to travel whenever I can.
Ukusebenzisana neendwendwe kuxhomekeke kubo. Unokuba apha kwaye akukho mntu uya kukukhathaza okanye sinokuhlala, ndingalungiselela uhambo lwemihla ngemihla, ndinike iingcebiso ngemisebenzi. Ndihlala kwidolophu enye, ngoko konke kuxhomekeke kuwe! :) 👥
Ukusebenzisana neendwendwe kuxhomekeke kubo. Unokuba apha kwaye akukho mntu uya kukukhathaza okanye sinokuhlala, ndingalungiselela uhambo lwemihla ngemihla, ndinike iingcebiso ngem…